I-HF29016 engwevu ehonjiswe ngepateni yeentyatyambo, eTshayina HF29016 engwevu ehonjiswe ngepateni yeentyatyambo abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-Zhejiang Rancho Santa Fe ekhaya textile Co.,Ltd
Inani Model: HF29016
Uyilo lwe-LAVISH KANYE NEMIBALA -100% microfiber ukuthamba okuhlala ixesha elide kunye nokuphumla kokugqibela kunye nokuxhathisa okungcono kunekotoni- I-Hypoallergenic coverlet iya kuwugcina umzimba wakho utsha. Inobukeka obungaphantsi, obunemonochromatic ngelixa izisa into eneenkcukacha kunye nobunewunewu kwigumbi..Ukulaliswa kwebhedi kukhaphukhaphu ngokwaneleyo ukuba kungasetyenziselwa kwimozulu eshushu, kodwa kukwahlala kubusuku obubandayo.
UKHETHO LWEPREMIUM MICROFIBER
UKUKHANYA KUNYE NOBUTOFO
Umgangatho ophezulu kunye nenkonzo enkulu yabathengi. Iimveliso zethu ziza nomgangatho ophezulu kakhulu kunye ne-100% yokhathalelo lwabathengi ukhathalelo olulula kunye nolusu oluhle. Indawo yethu yokulala lukhetho olufanelekileyo lokuphucula ukhuko lwakho ukusuka ekusebenzeni ukuya kubuhle.
Isikhuselo seBlue Duvet 3 Pieces Set Conch Pattern Printed Soft Cotton Comforter Cover